Soomaaliya oo 25 kadib Baareysa Tayada Badeecooyinka Soo Gala Dalka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Soomaaliya oo 25 kadib Baareysa Tayada Badeecooyinka Soo Gala Dalka
Soomaaliya oo 25 kadib Baareysa Tayada Badeecooyinka Soo Gala Dalka
Muqdisho (XT): Markii ugu horreysay muddo 25 sano ah ayaa waxa ay dowladda Soomaaliya soo rogtay in tayo baaris lagu sameeyo badeecooyinka dalka la keenayo iyo kuwa dibadda loo dhoofinayo kadib markii maanta la dhameystiray heshiis ay Wasaaradda ganacsiga & Warshadaha ay la gashay Shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo ku xeeldheer tayo-baarista.
Waxaa heshiiska dhanka Wasaaradda u xasiixay Wasiirka Wasaaradda Ganacisga & Warshadaha Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan, halka shirkadda PGM uu u saxiixay Gudoomiyaha Guddiga Maamula Dr. Arif Canacik, waxaana goobjoog ka ahaa Wasiiru dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dhiirrigelinta Maalgashiga Mudane Khaalid Cumar Cali iyo Safiirka Dowladda Turkiga ee Soomaaliya Danjire Olgan Bekar.
Wasiir Cabdiraxmaan ayaa saxiixa heshiiskan kadib la hadlay warbaahinta isaga oo sheegay muhiimadda ay leedahay in la baaro tayada badeecooyinka kala geddisan ee dalka soo gala iyo kuwa laga dhoofiyo.
Wasiirka ayaa yiri “ Shirkaddan Waxa ay ilaalinaysaa tayada badeecadaha dalkeenna la keeno iyo kuwa laga dhoofiyo. Dowladda ayaa ka masuul ah in qofka Soomaliga ah uu helo cunto iyo daawo tayo leh. Waa waajib saaran dowladda, gaar ahaan wasaaradda in ay ka fekerto tayada badeecooyinka dalka la keeno, lagana dhoofiyo.’
“Waxaa laga fekei jiray dhawr sano kahor qofka marka uu gurigiisa kasoo tago nabad maku noqon doonaa. Balse haatan waxaa la gaaray in laga fekero tayada cunta uu cunayo, daawada uu isticmaalayo iyo waxyaabaha daruuriga ah ee noloshiisa saameynta ku leh. Waa waajib saaran xukuumadda in ay baarto badeecooyinka dalka soo galaya si aysan dhibaato u geysay nolosha dadka iyo deegaanka”
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay go’antahay sidii ay uga qeybqaadan lahayd dib u dhiska iyo soo nooleynta adeegyada ay dowladda Soomaaliya u qabato shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu soo dhaweeyay heshiiska oo uu ku tilmaamay in uu yahay mid laba dalba faa’iido u leh.
“Waxaan jeclahay inaan idiin sheegno in Turkiga uu sii wadi doonto taageerada uu siiyo shacabka Soomaaliyeed, heshiiskanna qeyb ayuu ka yahay qorshaha aan ku xoojineyno hannaanka dowladnimo ee Soomaaliya.” Ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay.
Shirkadda PGM ayaa ah shirkad caalami ah oo xafiisyo ku leh dalal badan oo caalamka ah, saldhiggeeduna yahay dalka Turkiga. Waxa ay sidoo kale baaritana ku sameysaa dhamaan waxyaabaha la geeyo iyo kuwa laga soo dhoofiyo dalka Turkiga.
Taniyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991dii ma jirin wax tayo baaris ah oo lagu sameeyay badeecooyinka dalka soo gala. Waxaa jirtay in dalka loo soo dhoofin jiray cuntooyin iyo daawooyin dhacsan iyo kuwa tayadoodu liidato oo aan bani aadamka loogu talagelin in uu isticmaalo.
Previous articleTUSMO: Qoys Dumay Qaran Ma Dhisaa?
Next articleCadadkii 19aad ee Xaqiiqa Times